Fanafody covid-19 : azo alaina eny amin’ny CSBII | NewsMada
Fanafody covid-19 : azo alaina eny amin’ny CSBII
Nitondra fanamarihana omaly ny dokotera Rakotoa­ri­vony Manitra, talen’ny fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon’ny mini­siteran’ny Fahasalamam-bahoaka, omaly fa efa napetraka ny fandaminana vaovao ho an’ireo olona nahavita fitiliana ary voaporofo fa mitondra ny coronavirus.
Tsy voatery mankeny amin’ny DGSF eny Befela­tanana intsony izy ireo maka ny fanafody fa avy hatrany dia eny amin’ny CSB akaiky azy. Natao izany hisorohana ny fivezivezena sy ho fitsinjovana ny rehetra amin’izao hamehana ara-pahasalamana tsy misy fitaterana izao.
Ho an’ireo marisarisa ara-pahasalamana, mila manatona eny amin’ny Village voara aloha manao fitiliana. Rehefa voaporofo fa msy coronavirus ilay olona dia manao safidy na hihiboka any an-trano hanao ny fitsaboana na hijanona amin’ireo toerana ma­nokana fandraisana ireo olona tsaboina.
Omena ny tompon’andraikitra ny adiresy sy ny laharan’ny finday ho an’ireo misafidy ny hitsabo tena any an-trano ary antsoina avy eo anaovana fanadihadiana fohy ary hanoroana ny fanafody tokony ampiasaina.
Entina any amin’ny CSB ilay soratra maro sosona nalefan’ny tompon’andraikitra misy ny lisitr’ireo fanafody sy ny fanamarihana fa nahavita fitiliana marina hakana ny fanafody. Tsy maintsy mitondra ny kara-panondron’ny marary sy ny kara-panondrony ilay olona haka ilay fanafody.
Mijanona any an-tokantrano ilay olona voatily fa maniraka olon-kafa kosa maka ny fanafody raha ny fanamarihana hatrany.
Tanterahina any an-tokantrano ny fitsaboana ary fanafody ampy sy sahaza ny fitsaboana no omen’ny CSB. Mi­to­hy ny fanaraha-maso ataon’ny “plateforme” amin’ny fiantsoana isan’andro ilay marary manontany ny fivoaran’ny fahasalamana.